Mugabe pushes for 2012 elections | News24
Multimedia > Africa > Mugabe pushes for 2012 elections
Zimbabwe's Vice President Joice Mujuru dances upon arrival for the official opening of the Zanu-PF Congress in Bulawayo. Loyalists of the Zimbabwe president's party are gathering in the nation's west for a five-day convention in preparation for polling next year. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Mugabe's party convention is the last major gathering before crucial elections proposed for next year to end the country's fragile coalition government. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Oppah Muchinguri, leader of Zanu-PF's women's league, addresses women as they wait for Zimbabwe's President Robert Mugabe to officially open the official opening of the Zanu PF Congress. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Supporters of Zimbabwe's President Robert Mugabe wait for him to arrive for the official opening of the Zanu-PF Congress in Bulawayo. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Zimbabwe's President Robert Mugabe and his wife Grace greet the crowd upon arrival for the official opening of the Zanu PF Congress. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Zimbabwe's President Robert Mugabe and his wife Grace, at the official opening of the Zanu-PF Congress in Bulawayo. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Zimbabwe's President Robert Mugabe delivers his opening speech at the official opening of the Zanu-PF Congress in Bulawayo. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Some of the loyalists of the Zimbabwe president's party are gathered in the nation's west for a five-day convention.(Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
A supporter of Zimbabwe's President Robert Mugabe. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
A supporter of Zimbabwe's President Robert Mugabe sings revolutionary songs at the official opening of the Zanu-PF Congress. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)
Zanu-PF supporters welcome Zimbabwe President and party leader Robert Mugabe upon his arrival at the party's 12th National People's Conference. (Jekesai Njikizana, AFP)
South Africa's African National Congress secretary general Gwede Mantashe, in white shirt, centre, attends the official opening of the Zanu-PF Congress in Bulawayo. (Tsvangirayi Mukwazhi, AP)